Madaxda ismaamullada oo saluugsan 43 bilyan oo ay dowladda dhexe ku wareejisay | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxda ismaamullada oo saluugsan 43 bilyan oo ay dowladda dhexe ku wareejisay
Madaxda ismaamullada oo saluugsan 43 bilyan oo ay dowladda dhexe ku wareejisay
Golaha barasaabyada ismaamullada wadanka ee (CoG) ayaa soo dhaweeyay in dowladda dhexe ay soo saartay lacag dhan 43.5 bilyan oo shilin si loogu bixiyo deymaha .
Hasa ahaate waxaa uu xusay in dhaqaalahan uusan ku filnayn in si dhameystiran loo gudo amaahda .
Guddoomiyaha guddiga maaliyadda , qorsheynta iyo dhaqaalaha ee CoG, Ndiritu Muriithi ayaa sheegay in 39 bilyan oo lacagtan ka mid ah la doonayo in dowlad deegaanada ay si siman u qaybsadaan.
Waxaa uu intaa ku daray in 47-da ismaamul ee ay Kenya ka kooban tahay aan bishii Afaraad ee sanadkan la siin 27.052 bilyan.
Mr. Ndiritu oo sidoo kale ah barasaabka Laikipia ayaa sheegay in maadaama wasaaradda maaliyadda aynan xilligii loogu talagalay soo saarin lacagaha ay dowladda dhexe u qoondeysay ismaamullada ay sababtay inaan la bixin musharaadka shaqaalaha laga soo billaabo bishii saddexaad.
Mas’uulkan ayaa xusay in lacagta hadda lagu wareejiyay ee ah ku dhawaad 44 bilyan in inteeda badan lagu bixin doono qarashaadka musharaadka , canshuurta KRA, caymiska caafimaadka ee NHIF iyo kuwa howlgabka ee NSSF.
Guddoomiyaasha dowlad deegaanada ayaa hadda dalbanaya in wasaaradda maaliyadda ay ku wareejiso lacagihii loo qoondeeyay bishii Shanaad iyo bishan lixaad ee aan la siin oo dhan 58 bilyan.
Bayaanka golaha CoG waxaa qayb ka ah in ismaamullada ay ka go’antay bixinta lacaga deymaha ee ka maqan qandaraasleeyda.
Next articleXoghayaha guud ee ururka qaran ee macallimiinta KNUT oo is casilay